Maamulka Gobolka Banaadir oo baaraya qof kasta oo ku dhinta Muqdisho – Radio Daljir
Abriil 9, 2020 5:54 b 0
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa soo saaray amar lagu baarayo qof kasta oo ku dhinta Muqdisho, si loo hubiyo haddii uu u geeriyooday cudurka Coronavirus iyo in kale.
Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Banaadir ee dhanka Arrimaha bulshada Basma Caamir ayaa shaacisay in amarkan loogu tala galay sidii loo xakameyn lahaa cudurkan, isla markaana looga hortagi lahaa in aanu sii faafin cudurka Coronavirus.
“Waxaan dooneynaa in dadka la aasayo aan ka ogaanno xanuunnada ay u geeriyoodeen, si loo hubiyo inay leeyihiin yihiin astaamaha cudurka coronavirus, markaas haddii ay dhacdo inuu qofkaas u dhintay xanuunkaas, waxaan amarradan ugu talagalnay isidii loo xakameyn lahaa inuusan sii faafin cudurkaas”ayay tiri Basmo Caamir.
Sidoo kale waxaa ay sheegtay in amarkan aanu ujeedkiisa aheyn in aan la aasi karin qof meyd ah, balse uu yahay marka hore la baaro qofka waxa uu u geeriyooday, si aanu cudurka haddii qofka u dhintay loo ogaado oo aanu bulshada dhexdeeda ugu sii faafin.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa shalay xaqiijisay in qofkii u horreeyay uu u geeriyooday cudurka Coronavirus, kaasoo ah bukaan 58 sano jir ah, waxaana la karantiilay dhammaan dadkii ka ag dhowaa bukaankaas.